Tombom-pihetseham-po tamin'ny taon-dasa 3000 taona - Tattoo Ideas Art
Tendrombohitra mama tamin'ny taon-dasa 3000
sonitattoo Jolay 5, 2016
3,000 Taitra tamin'ny taon-jazavavy vavy dia rakotra takelaka miafina. Ilay mamanay, izay hita tao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Deir el-Medina, Ejipta, dia vehivavy iray izay nirehareha tamim-pireharehana ny masom-borona masina teo amin'ny tendany, ny soroka ary ny lamosiny, ny lotus dia mamony eo amin'ny andilany ary ny ombivavy eo amin'ny sandriny.
Tatoazy amin'ny tendan'ilay mamba
Tao amin'ny tanànan'i Deir el-Medina ilay mamanay. Mariho fa ny tatoazy sasany dia mibaribary amin'ny maso tsy mitongilana, fa ny sasany kosa dia ao amin'ny vatana izay voakapan'ny alim-bary ampiasain'ny mummification.
Tamin'ny fampiasana sary tsy mipetrahana, Ghadan Darwish Al-Khafif, anthropologist dia afaka nahita ity tatoazy ity tamin'ny ombivavy roa, misolo tena ny andriamanibavy Hathor. Nampiasa dikan-tsoratra nomerika ihany koa izy mba hanonerana ny fanitarana ny sary vokatry ny fanesorana ny hoditry ny mum.
Ghada Darwish Al-Khafif, manam-pahaizana momba ny Anthropologist, dia mampiasa sary an-tsiramamy mba hahitana ireo tatoazy eo amin'ny hoditra simba.
Vakio eto ny tantara feno
tattoos backhenna tattootatoazy lolotattoos voronarip tattoostattoos mpivadymehndi designmozika tatoazycompass tattoofitiavana tatoazytattoo octopusdiamondra tattooarrow tattootanana tatoazytattoo infinitytattoo ideaskoi fish tattoomoon tattooseagle tattoostattoos rahavavyraozy tatoazyAnkle Tattoostattoo eyescorpion tattooanjely tattoostattoos armloto voninkazoHeart Tattoostatoazy ho an'ny zazavavyTattoo Feathertattoos crosstattoos foottattoo watercolortattoos mahafatifatytato ho an'ny vatofantsikatattooslion tattoostatoazy fokotattoostattoo cherry blossomtratra tatoazyelefanta tatoazycat tattoosmasoandro tatoazyTatoazy ara-jeometrikatatoazy voninkazotattoos sleevenamana tattoos tsara indrindraNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoos ho an'ny lehilahy